May 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 31, 2018 Puntland Mirror 0
Buuhoodle-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland ayaa sheegay in dagaalka hadda u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland uusan joogsami doonin ilaa Somliland laga xoreeyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Isaga oo la hadlayay boqolaal shacabka […]
Madrid-(Puntland Mirror) Zinedine Zidane ayaa sheegay in uu ka tagay macalinimada Real Madrid, shan maalmood kadib markii uu kooxda u hoggaamiyay in ay saddex jeer oo isku xigta ku guuleystaan koobka horyaalka kooxaha Yurub. Zidane […]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wadahadal la yeeshay dhiggiisa Kenya ee Uhuru Kenyatta kulan ka dhacay magaalada Nairobi Arbacadii. Labada hoggaamiye ayaa ka wada-xaajooday xiriirka labada dal ee dhinacyada ammaanka, […]
May 30, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in dhibbaato balaaran ay ka jirto magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. “Degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa hadda waxaa ka socda caburin, xarig iyo jirdil aan la aqbali karin oo […]
Buuhoodle-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah u safray magaalada Buuhoodle ee gobolka Ceyn, sida ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Cabdixakiin Cumar Camay ayaa inta uu ku […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah xukun dil ah ku riday saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Xasan Nuur Shuute ayaa sheegay in saddexda xubnood ay ka dambeeyeen qarax […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali military court on Wednesday sentenced three Al-Shabab members to death penalty. The chairman of the military court Hassan Nuur Shuute has said that the three members were behind an explosion at a […]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa muujiyay walaac ku saabsan dhacdooyinka sii kordhaya ee farogelinta ah oo dhinacyo aan Afrikan ahayn ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya. Intii lagu guda […]
May 29, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Hal askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay weerar ka dhacay tuulada Canjeel ee gobolka Bari xalay, oo ay qaaday maleeshiyada ISIS. Fowsi Xasan Ismaaciil, oo ah taliyaha ciidamada Puntland katirsan ee […]
Laascaano-(Puntland Mirror) Shalay oo ahayd 28ka May 2018 mudaaharaad nabadgelyo ah oo ay dhigayeen shacabka magaalada Laascaanood ayaa isu bedelay qalalaase dhiig ku daatay ka dib markii maamulka Soomaaliland ay kala hortageen weerar arxan daro […]
Nairobi-(Puntland Mirror) Safiirkii Mareykanka u joogay Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa iscasilay, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo ku dhow safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Iscasilaadiisa ayaa lagu sheegay arrimo shakhsiyadeed, sida ay ilo-wareedku sheegeen. Bishii July ee sanadkii [...]
Ciidamada Puntland oo dib uga qabsaday Al-Shabaab tuulada Af Urur
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ayaa maanta oo Talaado ah dib uga qabsaday Al-Shabaab tuulada Af Urur, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ciidamada ah. Ilo-wareedyo katirsan ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa sheegay in wax iska hor imaad [...]